Omen, talladahayga shineemo - Geofumadas
Juunyo, 2009 Cartografia, Leisure / waxyi
Omen waa filim Nicolas Cage, oo aan kugula taliyo booqdayaasha balooggan ee xiisaha u qaba isku duwaha lat / dheer.
Uma malaynayo inaan kuu sheego sheekada maxaa yeelay xiisaha ayaa lumay laakiin asal ahaan waa warqad go'an oo leh nambar ay gabadha lixdanka sano jirsatay qorto taas oo lagu meeleeyay kaabsal waqti. 50 sano ka dib waa furan yahay, oo Nicolas, oo ah macallinka sawir-qaadista, wuxuu bilaabaa inuu hubiyo haddii ay qabaan wax caqligal macquul ah oo ku saleysan adeegyada internetka iyo khariidadaha internetka.
Waa wax xiiso leh in nambaradu u dhigmaan liistada ay kujirto latitude, Longitude, taariikhda iyo tirada dhimashada ka timid shilalka waa weyn sanadihii 50 sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo qaarkood ay ku dhow yihiin inay dhacaan ... wayna dhacaan!
Saamaynta gaarka ahi aad bay u wanaagsan tahay, laakiin shaki ku muuji in jidka agtiisa uu leeyahay heer sare oo ah dareenka boomaatada, kuwa fahmaya cabirkaas ayaa ah mid aad u xiiso badan.
Ugu dambeyntiina waxay ka baxaysaa saameyn xoog leh, taas oo ku xirnaan doonta aragtida diineed ee aragtida. Dhaleeceeyayaasha ayaa tooganaya, laakiin waxaan ku talinayaa iyada, halkii ay seexan lahayd daawashada madxafka habeenka.
Post Previous«Previous Waan socdaalayaa
Post Next Blogs 3 iyo geofumadas 8 on duulimaadkaNext »